सुत्केरी हुन २० हजार भाडा दिनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता !
रुकुम। बाँफिकोट गाउँपालिका– ७ की २२ वर्षीय कमला खत्रीलाई पहिलो पटक सुत्केरी वेथा सुरु भएपछि उनका आफन्तले जिल्ला अस्पताल सल्लेमा ल्याए । सुत्केरी गराउनका लागि एक साताअघि अस्पताल आएकी उनको त्यहाँ कुनै ...
रोग निको पार्ने अस्पतालमा निरोगी नै विरामी भएपछि …..
काठमाडौं । नेपालका ठुला निजी,सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा विरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका ठुला अस्पतालका रुपमा लिईने विर अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय ह्रदयरोग केन्द्र, सहिद शुक्रराज सरूवा...
एक वर्षदेखि ईन्डोस्कोपी सेवा छैन
काठमाडौं । सेती अञ्चल अस्पतालमा विरामीको चाप बढेसँगै झन नयाँ नयाँ उपकरण र सेवा थपिनु पर्नेमा नौ बर्ष अगाडी सुरु गरिएको ईन्डोस्कोपी सेवा पनि बन्द भएको छ । ईन्डोस्कोपी सेवा एक बर्ष देखि बन्द भएपनि, अस्प...
जुम्ला । पटक–पटक भएको कर्णाली राजमार्ग अवरुद्धले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ । एक सातादेखि कर्णाली राजमार्गमै अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेका गाडी थन्किएकाले प्रत...
टमाटरको फेस मास्क
शनिबार, भदौ १७, २०७४
टमाटरको प्रयोग राम्रो स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर मानिसको अनुहारलाई निखार्न पनि प्रयोग हुने गर्छ । टमाटरमा मानिसको अनुहारलाई निकै फाइदा दिने तत्वहरु हुन्छन् । यसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई कम गर्न सघाउ...
डडेल्धुरामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्दो
डडेल्धुरा । भाइरल ज्वरोका कारण डडेल्धुराका विभिन्न गाउँपालिका प्रभावित भएका छन् । बिशेषगरी जिल्लाको भागेश्वर, अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गालगायत गाउँपालिकामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको स्थानीयवासीले ...
चितवन । चितवनमा उपचार गरिएका बिरामीमध्ये ३०९ जनामा स्वाइनफ्लु संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले आज दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो तीन महिनाको अन्तरालमा ३०९ जनामा स्वाइनफ्लु...
कैलालीमा स्क्रव टाईफस रोगको संक्रमण
कैलाली । कैलालीमा स्क्रव टाईफस रोगको संक्रमण फैलिएको छ । साउन महिनामा मात्रै सेती अञ्चल अस्प्तालमा उपचारका लागि ३३ जना आएका छन । तर अञ्चल अस्पतालमा जाँच गर्ने किट नभएका कारण विरामीहरु निजि ल्यावहरुमा ...
प्रविधिको पहुँच र यसको दु्रत विकासले मानव जीवनका धेरै पक्षमा सहयोग पुगेको छ तर यही प्रविधिमा सरकारी निकाय र प्रहरीको पकड मजबुत नहुँदा विकृतिले समेत जरा गाडेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि इन्टरनेटबाटै सञ...
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेताहरुले सुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य शिक्षाको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका प्रा डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा...
संविधानमा अपांगता विषय समेटिएका छन्ः स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौँ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानमा अपांगता भएका व्यक्तिका विषयमा धेरै कुरा समेटिएको बताएका छन् । कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाको समन्वयमा आज आयोजित ‘अपांगतासम्बन्धी प्रथम राष्ट्रि...
म्याद नाघेको औषधीले बालिकाको मृत्यु भएपछि..
मङ्लबार, साउन २४, २०७४
काठमाडौं । चिकित्सकहरुले म्याद नाघेको औषधी चलाउदा राजधानीमा एकबालिकाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण भन्दै पीडितका परिवारले काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा प्रदर्शन गरेका ...
खोटाङ । दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएपछि जेठा छोरा सुमनको १९ वर्षमै मृत्यु भयो । सुमनको काजकिरिया नसकिँदै माइला छोरा सोही रोगबाट जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । हुर्किसकेको एउटा छोराको मृत्यु हुनु र अ...
सेक्सपछि किन निदाउछन पुरुषहरु ?
यहाँहरु सबैले सुन्नु भएकै हुनु पर्छ प्राय गरेर स्त्रीहरु आफ्नो पुरुषसँग यौनकृया गरे पछि गुनासो गर्ने गर्छन् किनभने यौन कार्य गरे लगतै प्राय पुरुषहरु निन्द्रामा पर्ने गर्दछन्।त्यसबेला स्त्रीहरु आफ्नो स...
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए क्यान्सरको प्राकृतिक उपचारको फल, जुन फल नेपालमा मात्रै पाईने
आइतवार, साउन १५, २०७४
संसारका करोडौं मानिसहरु क्यान्सरबाट पीडित छन् । क्यान्सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रोग हो । तर रुसी वैज्ञानिक ह्रिस्टो मेर्मेर्सकीले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचार पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । रुसका वैज...
श्रीमतीको यौन सन्तिुष्टप्रति
म अहिले ५७ वर्षको भएँ । मेरी श्रीमतीलाई यौन सन्तुष्टि दिएर खुुसी राख्न चाहन्छु । थुप्रै प्रकारका औषधि खाइसकेँ । भियग्रा पनि प्रयोग गरिसकेको छु । भियग्रा विभिन्न नाममा उपलब्ध हुँदो रहेछ । कुनैले काम ...
वालिङ । स्वाइन फ्लुका कारण स्याङ्जाको वालिङमा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । उपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वालिङ–१४ का ४९ वर्षीय खुमप्रकाश अर्यालको गत सोमबार मृत्यु भएको हो...
‘नआत्तिनुस् थाइराइड कुनै रोग होइन’ : डा. ज्योती भट्टराई
थाइराइड कुनै रोग होइन । थाइराइड भनेको गलग्रन्थी हो । जसले थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्छ । यसको मुख्य काम भनेको शरीरको मेटाबोलिजम नियन्त्रण गर्ने हो । जसले शरीरलाइृ फर्तिलो बनाउने काम गर्छ । थाइराइड ग्रन...
मङ्लबार, साउन १०, २०७४
आजकाल धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो बढिरहेको तौलका कारण चिन्तित छन् । यी मानिसहरु तौल घटाउनका लागि निकै कोशिस पनि गर्छन् तर उनीहरुको कोशिसले रंग ल्याउँदैन । यदि यो सूचीमा तपाईं पनि समावेश हुनुहुन्छ भने एकपटक...
चितवन । स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमणबाट गत वर्ष चितवनमा चारजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनका किट नियन्त्रण निरीक्षक रामकुमार केसीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ७६५ जनाको रगत...